Sistemụ arụmọrụ na agha: Microsoft na nche megide onye ọ bụla! | Site na Linux
Sistemụ arụmọrụ na agha: Microsoft na nche megide onye ọ bụla!
Taa, nke ugbu a «Sistemas Operativos» karisia «Windows» Ha na-agba ọsọ na-emeghe iji mee ka ndị kachasị mma nke ndị ọzọ wee zigara ha ngwaahịa ha. Ugbu a «Microsoft», Companylọ ọrụ nke Redmond, USA, nwe «Windows», enwetala ya na usoro ọhụụ ọhụụ na ihe ijuanya na-abụghị nke ọdịnala, iji mee nke ya, jigide oke ahịa ahịa nke ndị «Sistemas Operativos» de kọmputa nkeonwe Gburugburu ụwa. Inweta maka nke a ọkara mbụ nke 2019 jisiri ike gbakọta karịa otu 80% nke ya.
«Windows» ugbu a ọ dị ka, kama ime ya agha to «MacOS» y «GNU/Linux»ma ọ bụ «Android» y «iOS», na-ahụ ha n'anya. Ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị bụ: Ndi nke a enweghi ike ibu otu n'ime ndi ahu huru n'anya?
1 Sistemụ nrụọrụ: Microsoft na-akwụ ụgwọ
1.2 A gam akporo na iOS
2 Sistemụ arụmọrụ: GNU / Linux na counterattack
Sistemụ nrụọrụ: Microsoft na-akwụ ụgwọ
N'ezie, ụfọdụ ndị na-eji «MacOS» na karia ihe nile «GNU/Linux», ga-emegide ya, na ndị ọzọ ihu ọma. Echere m na, ma ọ dịghị ihe ọzọ na mbara, free na-emeghe ụwa nke «Linux» na ọtụtụ ọdịiche ya, ọtụtụ ga-emegide, ma ọ bụ opekata mpe otu ọnọdụ nke ntụkwasị obi ma ọ bụ ntụkwasị obi gbasara ngwaahịa nke «Microsoft» ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke GAFAM gbasara nke anyi «Linux», n'ihi na akụkọ ihe mere eme ha iji data njirimara eme ihe.
Agaghị agụta, akụkụ nke «Telemetría, Spyware y Adware» ma ọ bụ nke ọma nke a na-ahụkarị na ha. Na na-adịghị na-emekarị chọpụtara na / ma ọ bụ dozie ihe n'ụzọ dị irè na rụọ ọrụ nke ọma dị ka ndị nwere ike ịchọta ndị ọzọ, karịsịa na «Linux».
«Windows» ọbụghị naanị na webatala (webata) nke «Kernel» (Terminal/Comandos) de «Linux» n'ime onwe ya, ma n'ime ya ụlọ ahịa weebụ, ugbu a na-enye ohere download nke Ihe nkesa (Distros) zuru ezu ma na-arụ ọrụ.
Na mgbakwunye, ọ na - eji nwayọọ nwayọọ etinye ihe «Ecosistema Linux» ngwa dika: «SQL Server, .Net, Visual Studio Code y Skype». N'oge na-adịghị anya, o kwere nkwa itinye ya n'ọrụ «Navegador Edge», nke «Antivirus Defender». Ma onye maara, na mberede ọ iju onye ọ bụla na a «Suite ofimática MS Office» maka Linux.
A gam akporo na iOS
Na usoro nke «Android» y «iOS», «Microsoft» enyere ndị ọrụ nke kwuru «Sistemas Operativos» ngwaọrụ mkpanaaka android y iOS:
Okwu, Excel na PowerPoint
Outlook, OneNote, na OneDrive
Skype, Office Lens, Yammer, Delve, Ìgwè, na Stream
para «MacOS», «Microsoft» emejuputa atumatu ihe ndia na ya:
Okwu, Excel na Power Point
Nlele, OneNote na OneDrive
Otu, Skype na Desktọọpụ Ime Ime
Ndị ọzọ: Microsoft AutoUpdate, Defender ATP, n'etiti ndị ọzọ. Ma ugbu a ọ na-achọ ịmalite ụdị beta nke Edge.
Sistemụ arụmọrụ: GNU / Linux na counterattack
Eziokwu bu na, ruo ogologo oge, «Comunidad del Software Libre y Abierto» wakpoola «Ecosistema Privativo y Cerrado» na-eme ka dị, ọtụtụ ngwa na usoro ndị ọzọ na ndị ahụ Omenala na azụmaahịa IT azịza nke na-emeri na ya, ma nke a na-apụghị itinye n'ọrụ na nke bara uru. Anyị agaghị edepụta ha n'isiokwu a n'ihi na ha karịrị akarị ma dee ọtụtụ ihe banyere ha na nke a blog na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mana ọ bụrụ na ọ bara uru ikwu, na e nwere ọtụtụ weebụsaịtị wepụtara maka ha nke anyị nwere ike inyocha iji mara, jiri ma kesaa, wee zere «Microsoft» wakporo nke anyi «Ecosistemas Libre y Abierto» ya na ngwa ya juputara na onye maara ihe Koodu na adighi nma, odi nma ma obu benign.
Nhọrọ Linux Alternative
Ma kwuru banyere ndoputa ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke:
Isi mmalite Google
Taa, anyị nwere ike ikwu n'ụzọ ziri ezi na anyị nọ n'ọnọdụ mgbanwe nke omume onye ọrụ, n'ihe gbasara teknụzụ ndị dịnụ, ike ahịa na obe-ikpo okwu IT ngwọta. Na na, na usoro nke «Sistemas Operativos» nke ndị ọrụ nke kọmputa desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka, «Microsoft» na-achọsi ike igboju ọtụtụ mkpa na otu ahụmihe.
Nke ahụ bụ, nwalee nke a Multipolar IT ụwa ma ọ bụ Usoro IT dị iche iche na-anọgide na-adabere n'ụzọ dị ukwuu ma ọ bụ na-achịkwa gburugburu ya na ọtụtụ ndị na-enweghị mgbagha na ndị kachasị. Ya mere, anyị hapụrụ naanị otu ọgụ ụbọchị niile na kwa ụbọchị «Comunidad del Software Libre y Abierto» ịghara ịrafu ya site na onyinye ndị mara mma nke iji ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu na-aba ụba Ngwọta IT «Microsoft» banyere «Linux», tumadi.
Olileanya obere ngosi a na ihe enweghị nchedo na / ma ọ bụ na-emerụ ahụ kedu ihe bụ ọnọdụ nke «Microsoft» na ngwa ya na-awakpo nke anyi «Ecosistema Libre y Abierto» de «GNU/Linux» na-esochi setịpụrụ ihe niile. Ebe ọ bụ na n’otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, anyị niile maara ma ọ bụ na-enyo enyo na ọ dịghị ihe ọma na-abịa, yana ngwa ha juputara na Telemetry, Spyware na Adware.
Anyị ga-aghọta nke ahụ, n'agbanyeghị ngwa dịgasị iche iche que «Microsoft» na-enye anyị, a ga-enyo enyo gị mgbe niile n'ihi Nnwere onwe na-agbasa site na «Software Libre y Abierto». «GNU/Linux», ebe ọ bụ na Community anyị na-enyekarị ngwa na sistemụ «Microsoft», mana «Software Libre y Abierto» o «GNU/Linux» ọ nweghị kaadị n'elu uwe ya, ha makwaara ya.
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, na weebụsaịtị nke Ekekọrịta Ahịa Net ị pụrụ ịhụ na ihe nkowa otú ọnụ ọgụgụ nke ahịa ahịa n'etiti «Sistemas Operativos» ugbu a, n'etiti ozi ndị ọzọ dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Sistemụ arụmọrụ na agha: Microsoft na nche megide onye ọ bụla!
Site na 2% ma ọ bụ karịa karịa PC linux na mbụ ruo 1,39%, anyị na-ahụ na Microsoft rafuru ọtụtụ.
Cristian Herrera dijo
A na-akwụ gị ụgwọ iji dee? Ọ dịghị mgbe Linux dị nso inweta oke oke na kọmputa nkeonwe, ọ bụrụ na ọ mere na sava. Banyere akpaaka ọrụ, Microsoft Office bụ ụlọ ọrụ kachasị mma dị.
Zaghachi Cristhian Herrera
Ms Office dị mma, mana onye ọ bụla na-eji ma na-atụle ihe kachasị mma maka mkpa ha nke ọma, yana ihe ndị ọzọ dị mkpa dịka ego, ọsọ na arụmọrụ. M na-eji ma hụ LibreOffice n'anya.
Ee, ịgba ọsọ GNU / Linux Distros na Windows mere ka ọtụtụ ndị gbuo nnụnụ 2 na otu nkume. 🙁
Ọ dị ka ihe okike na mmemme gafere maka obodo GNU n'efu n'ihi na ha ka na-ahọrọ ka MS Office banye na usoro okike Linux, n'echefughi na MS ejirila ikike ya weghaara usoro dị mkpa, na-ahapụ obere mpaghara mmepe maka obodo n'efu.
Felix manuel dijo
Emejuputa NET na Linux. Enwere m olileanya na otu ụbọchị Microsoft Office ga-abịarute Linux n'ihi na ọ bụ ụlọ na-enweghị atụ.
Zaghachi Felix Manuel
Ọ gaghị adị njọ, mana ha kwesịrị ịhapụ koodu ga-eme ka LibreOffice ka mma. Nke ahụ ga-abụ ezigbo ihe ịgbaso maka ha!
Mephisto Feles dijo
Enwere ike iji GNU / Linux (Debian 10 na nke m) tụnyere oke mmiri dị n’etiti ọzara na-enwu ọkụ ma dịkwa egwu, ebe ebe ị gbalịrị mbọ wee hụ udo, ọdịmma na ịdị jụụ, yana nke ka mma ịghara ịhapụ.
Ugbu a ọzara chọrọ ịwakpo mmiri anyị, ọ ga-adabere na onye anyị nọ n'ime ya.
Enweghị ebe ọ bụla ị ga-aga ……
Zaghachi na Mephisto Feles
Tony CG dijo
Kama "ịlụ ọgụ" ị nwere ike ịmekọrịta na ọrụ abụọ ahụ. Ihe omuma a di diri onye obula.
Zaghachi Toni CG
N'ezie, mana ndị dike teknụzụ ga-echekwa ma lekọta ha anya.
N'ụtụtụ echi (ebe a na America), m ga-agbanye PC na ihe mbụ m ga - eme bụ ịwụnye Ubuntu na Windows. Site na Storelọ Ahịa Microsoft. Ekwetaghị m na nke ahụ rụpụtara ọrụ. Amaghị m. Enweghị ịnọ na igwe arụmọrụ. <:
Daalụ maka okwu gị. Echere m na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana ị na-agwa anyị banyere ihe ọ bụla merenụ ma ọ bụ akụkọ banyere ya.
N'ezie ọ bụghị sistemụ arụmọrụ zuru ezu na-etinye Windows sistemụ maka Linux, mana ọ na - enye gị ohere iji: Bash, Git, APT, DPKG, SSH.
Nke a na-eji ọnụ, git, apt ịchọ nchịkọta, wdg, dpkg nke ịwụnye nchịkọta, wdg, na ssh nke bụ ọdụ ọzọ iji nweta ohere na sava.
Onye ahịa Steam maka Linux nwere ike ịgba egwu egwuregwu vidiyo ugbu a na akpa pụrụ iche
Linux 5.4 rc7: ihe bụ ihe ọhụrụ na ọkwa kernel ọhụrụ